Tsvaga Yakasarudzika Electric Road Bike | ebike Shuangye
musha Products electric bike motokari yemugwagwa Nyanzvi dzemigwagwa mabhasikoro emagetsi 700C * 35C
Motokari: 250W / 350W
Bhatiri: 36V 8AH / 10AH
Kukurumidza Kukurumidza: 25 - 30km / h
Max Mutoro: 80-100kg
Giya: 7/9/21/27 magiya
Akamedura System: 160mm zvemaziso Disc akamedura
Dhizaini nyowani nyanzvi dzemigwagwa mabhasikoro yemagetsi furemu kuchinjisa akawanda emusika mutengi zvevatengi, senge America neEurope. Kureba urefu hwese bhasikoro furemu uye wedzera bhatiri chubhu, wedzera bhatiri kugona panguva imwe chete. Kuonekwa kwese kweiyi nyanzvi yemugwagwa bhasikoro kwakanyanya kupfupisa nekuda kwekugadzirwa kwetambo yemagetsi muhubhu pasi. Uyezve wedzera iyo nzvimbo yekuisa kickstand pane iyo furemu, iri nyore kune vanhu sekufambisa kwekufambisa.
Yakagadzirirwa 250w mota pa nyanzvi dzemigwagwa mabhasikoro yemagetsi vhiri rekumashure, rinoita rakanakisa rakatsetseka bhawa bhasikoro remugwagwa kuti uwane iyo max kumhanya kwe25-30km / h munzira yakati sandara. Yekumhanya yemagetsi mota yemagetsi zvakare mubatsiri mukuru wekugadzira bhasikoro remugwagwa munzira nyore. Uye mota inopfuura makumi masere muzana muzana inoshanda uye pazasi pe80 Db ruzha. Zvese zvinogona kukuunzira kugona kwakanyanya asi yakaderera ruzha kukwira ruzivo.
Uya neakawanda-mashandiro mahombe skrini LCD kuratidza ratidza akawanda data emugwagwa e-bhasikoro, semuenzaniso Kureba, Mileage, Tembiricha, Bhatiri Kugona, Magetsi Simba, Max Speed ​​etc. Uye yakanakisa isina mvura inoita kuti iitewo basa rakanaka kunaya. Matanho mashanu ekutsigira rubatsiro uye kudzvanya thum throttle, ita kuti mota iwedzere kukurumidza kune izvi nyanzvi dzemigwagwa mabhasikoro.
Sangana ne36V lithium bhatiri inogona kukugadzirisa zvakasiyana zvinodiwa. Iyo yakajairwa bhatiri kugona ndeye 8AH, kana iwe uchida hombe, kune zvakare 10AH inogona kusarudzwa. Wedzera aruminiyamu chiwanikwa bhatiri chubhu ndechimwe chezvakakurumbira zveizvi nyanzvi dzemigwagwa mabhasikoro. Uye kurema uremu kunoita vatengi inogona kuifambisa zviri nyore, kuchaja bhatiri padyo nezvigadziko ine 42V 2A charger yakapihwa, uye mirira maawa 5-7 ekuchaja nguva yekupedzisa.
Ose kumberi nekumashure vhiri vanoshandisa 160 yemagetsi disc bhureki system, kunyangwe mune yakanyorovera kana kutonhora mamiriro ekunze kana mamiriro ekukurumidzira, inogona kupa pakarepo braking simba. Uye shandisa yakakurumidza kuburitsa marongero pamberi pevhiri, zviri nyore kubvisa vhiri repamberi kana uchida. Kune zvakare hydraulic disc brake inogona kusarudzwa.
Iyo yekukurumidza kuburitsa dhizaini zvakare ndeimwe yeakakosha eiyi yakanakisa flat bar yemigwagwa bhasikoro, ivo vari nyore uye haina mvura. Kune maviri anokurumidza kuburitsa nzvimbo pabhasikoro remugwagwa. Imwe pane yekuratidzira uye imwe pane yekutongaEr.
Kuti uwedzere vashandisi vakatasva nyaradzo, aya akasarudzika emabhasikoro emigwagwa anotora yakawedzera matayiri emabhasikoro, kune mana marudzi eta iwe aunogona kusarudza, senge 700 * 28C, 700 * 32C, 700 * 35C uye 700 * 40C. Sarudza imwe inova suitbale kumusika wako.
Tags:nyanzvi yemugwagwa bhasikoro flat bar mumugwagwa bhasikoro
Prev: 36V 350W yemagetsi bhasikoro yemagetsi 160 hydraulic disc brake
Next: Shuangye nyowani yemagetsi bhasikoro remigwagwa ine 36V bhatiri